Board polypropylene, Pe Solid Board, Plastic Solid Board - Bluestone
1.3 ugboro foamed PP osisi
2 ugboro foamed PP osisi
3 ugboro foamed PP osisi
4 ugboro fụfụfụ PP Board
Ihe profaịlụ PP na-afụ ụfụ dị elu
anyị ga-ahụ gị
na-enweta mgbe niile kacha mma
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Bluestone Plastic Technology Co., Ltd.Gaa
Bluestone Plastic Technology Co., Ltd. tọrọ ntọala na 1994 dị ka ụlọ ọrụ Japan, anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-agba mbọ mgbe niile na nyocha dị arọ na mmepe ngwa nke ihe nchebe gburugburu ebe obibi polyolefin. Na-etinye aka na nyocha na mmepe, nrụpụta na ire nke bọọdụ ụfụfụ polypropylene. Isi ụlọ ahịa ahịa dị na Shanghai, yana ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ lọjistik na Shanghai, Guangdong na Tianjin. Ụlọ ọrụ anyị na-emepụta bọọdụ Lowcell n'adabereghị na ya, na-eji teknụzụ ikuku carbon dioxide, bọọdụ PP na-afụ ụfụ na-adịgide adịgide.
inyocha anyị isi ọrụ
Anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-etinye aka na nyocha dị fechaa na mmepe ngwa nke ihe polymer enyi na enyi gburugburu ebe obibi polyolefin.
LOWCELL polypropylene (PP) f ...
LOWCELL H nchebe polypr...
Ndị injinia mmepe anyị nwere ahụmahụ. Ihe ị chọrọ bụ ọrụ anyị, oku gị bụ oku claion anyị.
1.5 Times Foamed PP Board
2 ugboro foamed oké PP Board
3 ugboro Foamed PP Board
Ihe profaịlụ PP dị elu na-afụ ụfụ
Anyị na-enye gị ngwaahịa dị elu, ndụmọdụ ịzụrụ, ahaziri gburugburu ebe obibi maka gị, ruo mgbe imewe nke ụlọ n'ọnụ ụzọ nke akụkụ ngwaahịa maka gị. Ka ị lekwasị anya na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, nke mere na mmepe ụlọ ọrụ gị jupụtara na ike.
Anyị na-enye gị ngwaahịa dị elu, na-eji ego dị ugbu a eme ihe n'ụzọ zuru oke na ezi uche dị na ya, na-eme mkpebi sayensị na usoro mmepe n'ọdịnihu, belata ọnụ ahịa R & D nke ụlọ ọrụ, ma na-abawanye uru.
Ahịa kwa afọ
Ọnụ ahịa ahịa na-abawanye kwa afọ.
Ndị injinia mmepe anyị nwere ahụmahụ. Nhọrọ gị bụ ọrụ anyị.
Anyị nwere ahụmahụ nke ọma na ọganihu nkà na ụzụ na-aga n'ihu.
Ọtụtụ ndị ahịa na-adị njikere ịhọrọ ngwaahịa anyị.
kacha ọhụrụ ọmụmụ ihe
LOWCELL polypropylene(PP) bọọdụ ụfụfụ bụ Carbon dioxide (CO2) SCF anaghị ejikọta ya na extrusion cell mechiri emechi.
A na-eji ya eme ihe na akụkụ ụgbọ ala, nrụpụta akụrụngwa, ngwa akwụkwọ, nkwakọ ngwaahịa, ihe ụlọ wdg.
Ogologo oke: 1-10mm. Njupụta: 0.2-0.7g/cm3. Enwere ike ịhazi nha na agba.
Kedu na-asụ ndị mmadụ
Onye nrụpụta ọkachamara. Ụlọ osisi ahụ nwere arụmọrụ dị elu. Ọ na-emezu ihe anyị chọrọ.
Ndị ahịa America
Enwere ọtụtụ ụdị bọọdụ ụfụfụ. Anyị nwere ike ịhọrọ osisi kwesịrị ekwesị n'aka ha.
Anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-etinye aka na nyocha dị fechaa na mmepe ngwa nke ihe polymer enyi na enyi gburugburu ebe obibi polyolefin. Anyị na mbụ na-etinye aka na mmepụta nke ihe ụfụfụ polypropylene na China.
ele ihe anya
LOWCELL Polypropylene foamed osisi
LOWCELL Polypropylene foamed osisi bụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara onwe ya. Ọ bụ mpempe akwụkwọ ụfụfụ polypropylene gbasasịrị ala site na teknụzụ ụfụfụ extrusion mbụ. Ọ bụ ihe na-emetụta gburugburu ebe obibi m ...
LOWCELL Polypropylene foamed board bụ ihe dị fechaa nke na-enye ezigbo nkwụsi ike, ịdịte aka na ihe na-adọrọ adọrọ, yabụ ejirila ya na ngwa nkwakọ ngwaahịa, dị ka akụkụ ...
Mwebata dị mkpirikpi nke bọọdụ ụfụfụ PP
bọọdụ ụfụfụ PP, nke a makwaara dị ka bọọdụ ụfụfụ polypropylene (PP), bụ nke polypropylene (PP) sitere na carbon dioxide gas. A na-achịkwa njupụta ya na 0.10-0.70 g / cm3, ọkpụrụkpụ bụ 1 mm-20 mm. Ọ nwere oke ...
Laboratories eji mee nyocha sayensị nwere ọtụtụ ụdị n'ihi na ha dị iche. Anyị na-enye ikike ọkpọkọ usoro zuru oke.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shanghai Bluestone Plastic Technology Co., Ltd.